Fumana i-PMP Certification kwi-2018-Notes Notes, Tips & & PSP Update Update
Fumana isiqinisekiso se-PMP kwi-2018-Certified Management Certification
UTSHINTSHA UKUBHALWA KWE-PMP ISATIFIKETHI KWI-2018
Ngethemba lokuphucula umsebenzi wakho njengoProfethi woLawulo lweProjekthi ulindele ukuba ufumane ukufaneleka kweetyala kwintsimi kunye nophando oluvuthayo lwendawo kunye neenkalo zokufunda ukuthabatha isimemezelo esifunekayo. Ngethuba lokufumana iSatifikethi sokuPhathwa kweProjekthi kwi-2018 kukuphakamileyo kwiplani yakho yosuku, nantsi i-nitty gritty ithatha i-gander kwindawo ethile yezinto eziza kutshintsha malunga neemviwo kunyaka olandelayo.
Sifanele siqalise nje ngamantongomane kunye neebhontshisi ezikuloo ndawo malunga naloo mntu kufuneka azi
Mfutshane kwi PMP - ukuvuma kwayo kokuqala kunye nesicelo sasikulo shishini lophuhliso, apho abaqeqeshi abalungiselelwe ukufikelela kwizinga elikhulu kunye neyona ncinane kunye neendawo zonke zeprojekthi yeqela. Ukususela kule nkalo imfuno ye-PMP yaphuhliswa kwaye namhlanje, onke amashishini, kuquka indawo ye-IT, bathembele kulaba baqeqeshi ukulawula iprojekthi ekuzalisekeni kwayo. Isiqinisekiso se-PMP sivunywe yiProjekthi yoLawulo lweProjekthi.
Incwadi - I-PMI ikhupha i-PMBOK yesikhokelo okanye iNcwadi yoLawulo lweProjekthi yoLwazi ukwenzela ukuba kube lula ukufikelela kwiindawo ezinamacandelo amahlanu-Ukuqalisa, ukuCwangcisa, ukuSebenza, ukuPhatha nokuLawula nokuVala. Ngaphakathi kwezi zigaba eziqhelekileyo ziwela kwimida yokufunda apho umncintiswano uqonda ukulinganiswa kunye nokulawulwa kwexesha, iindleko, ukuxuba iprojekthi, isicwangciso, umgangatho, i-asethi, i-correspondence, ingozi, ukufunyanwa kunye kunye namaqabane.
Cofa apha ukukhuphela Isikhokelo soPhando lwe-PMP
Uvavanyo - Uvavanyo oluxhomekeke kwiintsuku ezikhethiweyo zonyaka kwi-PMP eqinisekisiwe, ukuhlolwa kwe-Prometric kugxininise. Ithemba lifuna ukubonisa iimviwo ze-intanethi ezivavanya ukuqonda kwabo kwiindawo zokufunda ze-10. Uvavanyo lusasazeka ngaphezu kwemibuzo ye-200 ehlola uvavanyo olusisiseko, oluncedo kunye noluntu lwempikiswano lokujongana neemeko ezinjalo.
Ungaqwalasela kwakhona: I-PMP yoQeqesho loQeqesho kwiGurgaon
I-PMI ngenjongo yokugcina isatifikethi esisebenzayo kunye nezenzo zayo kunye nokuza, i-PMPBOK kunye nomzekelo wovavanyo iya kubonisa izenzo ezikhoyo. Kukho i-buzz malunga neenkqubela phambili, ukuba uvavanyo luxhomeke ngomhla we-26 Matshi, i-2018 nangemva. Kwimeko apho ucingisisa ngokungqinelana nombutho omdala, kuqikelele ukubonisa iimviwo ze-PMP ngaphambi komhla ongentla. Yiba njengoko kunjalo, xa ulahlekelwa ngumhla ofunekayo, nantsi i-once-over kwi-PMP @ Update Updates.
Ukulungelelaniswa kwe-PMP - Akuzange kubekho utshintsho kwi-qualification ye-PMP yabathengisi abafuna ukuvunyelwa. Kuxhomekeke kwimfundiso nokubandakanyeka kwintsimi. Ngethuba lokuba unesidanga se-Bachelor (iminyaka emine okanye elinganayo), ngelo xesha amava adingekayo yiyure ye-4500 yomsebenzi wokuqhuba nokuqulunqa iiprojekthi. Ngethuba lokungagqibekanga, musa ukukhungatheka, isatifikethi sekondari okanye i-degreeal yokuzikhethela ilindele ukuba ube neeyure ze-7500 zokuqhuba nokuququzelela iiprojekthi. Bobabili bafuna imigaqo yolawulo lweprojekthi yangekho ngaphantsi kweeyure ze-35, ziqinisekiswe ngumbutho we-PMI owaziwayo.
Isicelo - Inkqubo iya kuhlala i-2018. Kufuneka ugcwalise ifom yesicelo kwiziko le-PMI. Ukuqinisekiswa kwemfundiso, kunye nokudibanisa, kuqhutywe kwi-inthanethi ngumbutho.
PMBOK - I-PMI ikhiphe ukukhululwa kwe-6th ye-PMBOK. Utshintsho olusisiseko kwincwadi kunye novavanyo lulolu hlobo:
- Ukongezwa kwendima kunye nengqwalasela kwinqanaba lephambili leprojekthi. Ubuchule, ubuchule kunye namava aya kukhupha ukuqonda imibuzo ejolise kulo mmandla.
- Shintsha kwigama leemimandla ezimbini zokufunda
Ulawulo lwexesha luya kubhekiselwa kulawulo lweShedyuli
Ulawulo lweMithombo yoLuntu ngoku luya kubhekiselwa kuLawulo loLawulo
Imimandla emine entsha yongezwe kwingingqi nganye yolwazi, ingakumbi:
Iipateni kunye nezenzo zokunyuka
Iimvavanyo zoMmandla we-Agile ne-Adaptive Environment
Ucwangciso loviwo - amanqaku okufunda kunye nemizekelo iyaqhubeka njengangaphambili, naphezu kokunyuswa okutsha kwi-PMBOK. Unokwenza inkambo ye-PMP ngokwakho, kwaye usebenzisa indawo ye-PMI kunye noviwo lwe-intanethi ukugqiba ii-35 iiyure zoqhagamshelwano. Enye enye indlela ukujoyina inkqubo yokulungiselela eya kukunceda ngeZiko loPhuhliso loPhuhliso okanye ii-PDU. Abaqeqeshi abanolwazi baya kuba khona ukukwazi ukuqonda i-PMBOK, iingcamango zamabakala eziko kunye nokuqonda okucacileyo kwimida yolwazi. Izinto ekufuneka uzikhumbule ngexesha uceba uvavanyo -
Khangela uncedo ukuba uhlolisise ngabanye kwaye ubhekane neengxaki ngokusebenzisa i-lucidity. I-PMP ngaphakathi kwemibutho yakho okanye ukuhlanganiswa kwe-intanethi unceda indlela eyoyiyo yokufumana izimpendulo zemibuzo.
Kwimeko apho uye wajoyina isiseko, ungabi buhlungu ukuze wenze imibuzo, kwaye kubonakala. Ukuqinisekiswa kwe-PMP kuhlawula ixesha, imali kunye nokusebenza kwilungiselelo - nayiphi na into engaqinisekiyo kufuneka isuswe.
Beka ixesha kwixesha lakho elihle lokuhlaziya ukucinga nge-PMBOK
Ukuqeqesha ngokucophelela kuzisa ngeziphumo ezithembisayo, ngoko kunika iimvavanyo zokugculelwa, inani elikhulu kunazo zonke
Ekugqibeleni, hlala uqinisekile kwaye ujabule ngelixa unika uvavanyo. Ukukhathazeka kuya kubangela ukuba i-slip-ups
Ukuqinisekisa ukuba i-psyche yakho kunye nomzimba uyaqabuleka ngaphambi kokuba uvavanyo luyenze kunye nokulindeleke.
I-PMP Exam - Ixesha elithile elinesihlanu elinikezelwa ukuphonononga iphepha, kwaye emva koko uza kufumana iiyure ezine ukugqiba imibuzo ye-200. Uninzi lwamathemba unokuphonononga iphepha ngamaminithi emihlanu kwaye isebenzise yonke imizuzu ye-10 ukubhala amanqaku kwiphepha elinikezelwe ukunceda ukubala. Yiba nokuba kunjalo, ukuqhubela phambili olu qeqesho luya kukhutshwa. Yiba nokuba kunjalo, ukugijima kumanqaku okubhala okanye 'ukulahla kwengqondo' njengoko kubizwayo kuvunyelwe phakathi kweeyure ezine. Ekubeni i-PMP inganiki izimpembelelo ezingekho phantsi kweempendulo eziphosakeleyo, akufuneki ukuba uxinzeleleke kwimeko apho ufumanisa isisombululo.
Isiphumo - Abo bathatha uvavanyo olusekelwe kwiphepha baya kufumana iziphumo zabo kwiintsuku ezine xa isiphumo sokuvavanya kwi-intanethi sichazwa kwisibini sesahlulo. Uya kufumana elinye lamanqanaba amathathu:
Ukujongana nobomi bemihla ngemihla emva Sekiso sePPP - Unako ukufumana zonke iingcango ezivulekileyo xa i-declaration ifumaneka kunye nophuhliso lomsebenzi kunye nezikali zokuhlawula ngcono. Njengoko umphathi oyintloko uqhuba iprojekthi, awuyi kukhulisa nje ukubaluleka kobudlelwane bakho kunye nolwazi oluphuculweyo, ulungele ukulungelelanisa iithayimthebhile kunye neefa.
IPP-Certified - Emva kokuba uzuzile Sekiso sePPP, ngokukhawuleza kufuneka ufumane ii-PDU ze-60, ukuze uhlaziye isitifiketi.
Ekugqibeleni, kungakhathaliseki ukuba uthatha isigqibo malunga noviwo ngoku okanye emva kwe-26th Matshi, i-2018, kukho enye into ofuna ukuba icace ngayo kwi-Certified Management Certification ayikho into enzima ukuyifeza, nje kuphela xa utyalomisa inkqubela yokufunda nokuqhuba .